Gaafatatti fayyadamii gabateewwan deetaa keessaa kuusaawwan ulaagaa wayii irratti hundaa'i barbaadi.Gaafatoonni hundi kuusdeetaaf kan uumaman galfata Gaafatoota jalatti tarreeffama. Galfanni kun kuusdeetaa waan qabuuf,"qabee gaafataa" jedhamuu danda'a.
Gaafata ykn gabatee maxxansuuf
Galmee barruu (ykn yoo barbaadde galmee dalaagaa maxxansuu murtaa'e kanaaf galmee wardii ) bani.
Yoo gabatee maxxansuu barbaadde faayila kuusdeetaa erga bantee booda sajoo Gabatee cuqaasi,ykn yoo gaafata maxxansuu barbadde sajoo Gaafataa cuqaasi.
Maqaa gabatee ykn gaafataa galmee barruu ykn wardii bani jedhu keessatti harkisi.Qaaqni Tarjaalee saaqi kuusdeetaa ni banama.
Tarjaalee kam akka ta'e = dirreewwan deetaa dabaluu barbaadde murteessi.Yoo barbaadde qabduuOfDhangi'aa cuqaasi fi gosa dhangeessuu walitti dhufu filadhu.Qaaqa cufi.
Gaafatni ykn gabateen galmee kee keessatti ni dabalama.
Galmee maxxansuuf Faayilii- Maxxansijedhamuu filadhu.
Foo'insaa fi Calaltuu Deetaa
Gabatee gaafataa keessaa foo'uu fi calaaluuf si gargaara.
Gaafata ykn mul'annoo uumuuf fi gulaaluuf Saxaxa Gaafataa,fayyadami.
Kabala Saxaxa Gaafataa
Yeroo Gaafata SQL uumtu ykn gulaaltu, mul'ina deetaa to'achuuf sajoowwan kabala Saxaxa Gaafataa keessa jiran fayyadami.
Gaafata Gabateewwan Hedduu Keessan
Bu'aan gaafataa deetaa hedduu gabateewwan keessaatti qabachuu danda'a yoo isaan kun dirreewwan deetaa mijaa'aa waliin walitti kornya'an.
Ashakkii Gaafata ulaagaa
Gaafata haalan calaluuf opareetara fi ajaja kam akka ta'e baruuf gargaara.
Erga hediisa gabateewwan deetaa waliin adeemsiistee booda bu'aa isaa akka bu'aa gaafataatti kuusuu dandeessa.
Title is: Gaafatoota